बरिष्ठलाई उच्न्दिै राज्यमन्त्रीको दौडमा कनिष्ठ नेता | abc.com.np
Posted by abc staff. 1 year, 11 months ago. ( Comments )
अर्कोतिर, ललितपुरबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा विजयी भएका सांसद मदनबहादुर अमात्य र चन्द्र महर्जन जस्ता नेताले सरकारमा जाने मौका पाएनन् । सरकारमा मुस्लिम समुदायको नेतृत्व छैन् । अब्दुल रजार जस्ता मुस्लिम नेताको पार्टीमा कन्तविजोग भएको छ । काँग्रेसबाट सरकारमा महिला सहभागीता सुन्यप्राय छ । यता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई करोडौं रकम बुझाएर राज्यमन्त्री बन्न पार्टीका गुण्डा, ठेकेदार र व्यापारी सांसदहरुले दौडधुप थालेका छन् । पार्टीले आउने शुक्रबारभित्र ८ जना नेतालाई सरकारमा पठाउने निधो गरेसँगै राज्यमन्त्री हुन दौडधुप सुरु भएको हो । दौडमा पार्टीका निकै कनिष्ट नेताहरु रहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार पैसाको बाहुबलमा राज्यमन्त्री हुन लागेका ठेकेदार सांसदहरुका बारेमा जानकारी पाएपछि सभापति देउवानिकट एक दर्जन बढी सांसदहरु रुष्ट छन् । राज्यमन्त्री बन्ने दौडमा संविधानसभामा मकवानपुर जिल्लाबाट सभासद् भएका हेटौडा निवासी ईन्द्रबहादुर बानियाँ पहिलो नम्बरमा छन् । उनलाई भौतिक राज्यमन्त्री बनाउन नेता खुमबहादुर खड्काले सिफारिस गरेका बुझिएको छ ।
गत बर्षको महाभूकम्पमा उनी पाल काण्डमा मुछिएका थिए । हेटौंडा सिमेन्टको खानी शिवम सिमेन्टलाई विक्री गर्न लविङ गरिरहेका बानियाँको शिवम सिमेन्टको खानीमै लगानी छ । त्यसैगरी, अर्का व्यापारी सांसद दिपक खड्का पनि राज्यमन्त्री हुने दौडधुपमा छन् । उनी ठेकेदार, हाइड्रोपावर व्यवसायी मात्र नभई रेष्टुरेन्ट व्यवसायी पनि हुन् । सत्ता साझेदार पार्टी काँग्रेसले भागवण्डामा ८ जना राज्यमन्त्री परेको छ । जसमध्ये ५ जना देउवा पक्षबाट र ४ जना बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र तेस्रो शक्तिका रुपमा उदाएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले पाउने बताइएको छ । नेता सिटौलाको प्यानलबाट नेता तारामान गुरुङलाई सरकारमा जाने लगभग निश्चित छ ।